Banijya News | » मदिराको विक्री घटैकै हो ? नत्र किन घट्यो त राजस्व ? मदिराको विक्री घटैकै हो ? नत्र किन घट्यो त राजस्व ? – Banijya News
मदिराको विक्री घटैकै हो ? नत्र किन घट्यो त राजस्व ?
पुुस १७, काठमाडौं ।
सरकारी राजस्वको प्रमुख स्रोतमध्येमा पर्ने अन्तःशुल्कको ठूलो हिस्सा ओगट्ने मदिराको बिक्रीमा कमी देखिन्छ । उपभोग कम भएसँगै बिक्री घट्दा राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि घटेको छ । मदिराको बेफाइदाप्रति सचेत जनसंख्या बढेका कारण मदिराको बिक्री घटेको भए त ठिकै मान्न सकिएला । तर अर्थतन्त्र सुस्ताएको संकेत हो भने त्यसप्रति समयमै राज्यले सचेतता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो आँकडाले पनि मदिराको खपत कम भएको देखाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने मात्र होइन विदेशबाट आएका मदिरा समेत सपतमा कमी आएको देखिएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्म ६९ करोड ७९ लाखको मदिरा आयात भएको छ । जबकी गत वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १ करोड रुपैयााको मदिरा आयात भएको छ । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा खाने रमाउनेभन्दा पनि दैनिकी चलाउन आम्दानी बचाउनुपर्ने बढेको र मदिराको बिक्री घटेको व्यवसायी बताउँछन् ।
मदिराको उत्पादन र उपभोग दुबै घटेको उद्योगी बताउँछन् । मदिरामा सरकारले यो वर्ष मात्रै १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएको थियो । अन्तःशुल्क बढाउँदा मूल्य बढेको देखिन्छ । मुल्यको बृद्धिसँगै आम उपभोक्ताको क्रय शाक्तिपनि घटेको छ । यस्ले पनि गत वर्षको तुलनामा राजस्व घटेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत वर्षको मंसिरसम्ममा मदिराबाट ८ अर्ब ८९ करोड अन्तःशुल्क संकलन भएको थियो । यो वर्ष ६६ करोडले घटेर ८ अर्ब २३ करोड मात्रै यस अवधिमा संकलन भएको छ । त्यसैगरी गत वर्ष बियरबाट ९ अर्ब १८ करोड अन्तःशुल्क संकलन भएकोमा यो वर्ष ५१ करोडले घटेर ८ अर्ब ६७ करोड मात्रै संकलन भएको छ । कुल राजस्वमा अन्तःशुल्कको योगदान २० प्रतिशत छ । अन्तःशुल्कमा मदिराले ६५ प्रतिशतको योगदान गर्छ । यसरी अन्तःशुल्कमा आएको कमीले पनि सरकारलाई राजस्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउन कठिन भएको छ ।